अचम्म को दुनियाँ : छोरासँग बिहे गरेर आमा बन्दै छिन यी महिला ! – भिडियो सहित – Wow Sansar
January 19, 2021 381
आफ्ना श्रीमान्लाई छाडेर सौतेनी छोरासँग प्रेम–सम्बन्धमा रहेकी रुसी ब्लगर मारिना बाल्मासेभा आमा बन्ने भएकी छिन् । तौल घटाउने विषयमा धेरैलाई प्रोत्साहन गर्ने यी महिला अहिले आफ्नो निजी ह-र्कतका कारण चर्चाको पात्र बनेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित यी ब्लगरका ५ लाखभन्दा धेरै फलोअर्स छन् ।
३५ वर्षीया बाल्मासेभा गत वर्षदेखि २१ वर्षका सौतेनी छोरा भ्लादिमिर ‘भोभा’ सेभिरिनसँग प्रेम सम्बन्धमा छिन् । विश्वविद्यालयको छुट्टीमा घर आएका बेला यी दुईबीच प्रेम सम्बन्ध सुरु भएको हो । त्यसयता, भोभा र बाल्मासेभाले विवाह गरे । भोभाका बाबु एलेक्सी सेभिरिनले बाल्मासेभासँग डि-भोर्स गरिसकेका छन् ।आफ्नो छोरामाथि पूर्व श्रीमतीले आँखा लगाएको र भड्काएको बाबु सेभिरिनले बताए । ‘मेरो छोरालाई उनले भड्काइन् । म घरमै भएका बेला पनि रास-लिला गर्न उनीहरुलाई लाज भएन । यदी, मेरो छोराबाहेक अन्यसँग मोजमस्ती गरेको भए मैले सायद उनलाई माफी दिने थिएँ,’ बाबु सेभिरिनले भने ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला”****
कुखुराको भालेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता, यस्तो छ कारण
मानिस सामाजिक प्राणी हो । एउटै समाजमा बस्दा कहिलेकाहिँ मानिस–मानिसबीच विवाद र झगडा पनि हुने गर्छ । विवाद र झगडा हुँदा आफू पीडित भएको महसुस गर्ने पक्षले प्रचलित कानून अनुसार न्यायको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गर्ने गर्छन् ।समान्यत: अदालतमा मुद्दा जाँदा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आरोप लगाएर प्रतिवादी बनाएको हुन्छ । तर, फ्रान्समा एउटा यस्तो मुद्दा अदालतमा पुगेको छ जसमा कुखुराको भालेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आफ्नो छिमेकीले पालेको कुखुराको भाले धेरै बासेको (कराएको) भन्दै गाउँलेहरुले भालेलाई नै प्रतिवादी बनाएर स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।जसविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ, त्यो भाले कुखुराको नाम मोरिस हो । हरेक बिहान सबेरै उक्त भाले जोडसँग बास्ने गरेको र त्यसरी बास्दाखेरी ध्वनि प्रदूषण हुनुका साथै छरछिमेकका मानिसहरूको निद्रा बिथोलिएको आरोपमा मुद्दा दिइएको छ ।
फ्रान्सको इस्ले अफ अल्रनस्थित सेन्ट पियरे द अलरन गाउँमा स्थानीय करिन फेस्सयू नामकी महिलाले घरमा पालेको उक्त कुखुरामाथि छिमेकीले मुद्दा हालेका हुन् ।सन् २०१७ को अप्रिल महिनामा पहिलोपटक ती महिलाका छिमेकीहरुले कुखुरा कराएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । छिमेकीहरुले कुखुरा बासेर आफूहरुलाई डिस्टर्ब भएको भन्दै कुखुरालाई चुप राख्न भनेका थिए ।
Prevआज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
Nextआँचल शर्मा र उदिपलाई बच्चा कहिले ? भन्ने प्रश्न सोधेपछि आँचलले दिईन मुखभरिको जवाफ (भिडियो हेर्नुस)